के तपाई स्विमिङ् पुलको सौखिन हुनुहुन्छ ? एकपटक यो अवश्य पढ्नुहोस् ! – Etajakhabar
के तपाई स्विमिङ् पुलको सौखिन हुनुहुन्छ ? एकपटक यो अवश्य पढ्नुहोस् !
ताजा खबर :- के तपाई पनि फिट रहनको लागि स्विमिङ्ग गर्नुहुन्छ। के तपाई पनि स्विमिङ्ग गर्न मनपराउनु हुन्छ? सावधान कतै स्विमिङ्ग तपाईको लागि समस्या नबनोस्। तपाई पढेर अचम्ममा हुनुहुन्छ होला। के हो वास्तविकता जान्नुहोस्।
हालै एक रिसर्च अनुसार भनिएको छ, स्विमिङ्ग पुलमा कति मात्रामा यूरिन हुन्छ। क्यानडाका शोधकर्ताका एक रिसर्चमा पत्ता लाग्यो, कति मात्रामा स्विमिङ्ग पुलमा यूरिन हुन्छ।
क्यानडाको एलबर्ट यूनिभर्सिटीका सोधकर्ताले यूरिनको लेवल नाप्नको लागि एक टेस्ट गरे जसमा क्यानडाको २ शहरका ३१ पुलमा २५० स्याम्पल लिईयो र यस टेस्टका अनुसार स्विमिङ्ग पुलमा ७५ लीटर यूरिन पाइयो।
यो रिपोर्ट एन्वायरमेन्टल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी जर्नलमा प्रकाशित गरियो। यस रिपोर्ट गर्नको उद्देश्य यो जन्नू थियो कि २०१६ मा रियो ओलम्पिकको समयमा एक रात मै पुलको पानीको रंग परिवर्तन र पानीको क्वालिटीमा कमी कसरी आयो।
स्विमिङ्ग पुलमा यूरिन पाईनु भनेको स्विमर्सको हेल्थका लागि एक गम्भीर विषय हो किनभने यूरिन पुलमा पाईने केमिकल्सको साथमा मिलेर हाम्रो हेल्थलाई नोक्सान पुर्याइरहेको छ।
शोधकर्ताले रिसर्चका लागि आर्टिफिशियल स्वीटनर (Acesulfame-K (ACE) ) प्रयोग गरियो जून एक आइडियल यूरिनरी मार्कर हो। यो सीधा शरीरको भित्र गई यसको परिणाम देखियो। रिसर्चको समय दुई पुलमा तीन हप्ता सम्म यूरिनको लेवल नापीएको थियो।
अहिले यसमा थप रिसर्च जारी छ तर स्विमिङ्ग पुल्समा यूरिन हुनु हेल्थको लागि बढी नोक्सानदायक हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०६, २०७४ समय: ०:०६:५४